10 matipi uye madiki ekunyatsovandudza hupenyu hwebhatiri pane yako iphone 7 kana iphone 7 plus
Kuru Nhau & Ongororo 10 matipi uye madiki ekuvandudza zvakanyanya hupenyu hwebhatiri pane yako iPhone 7 kana iPhone 7 Plus
Saka, iwe & apos; wakazviwanira wega iPhone 7 kana iyo iPhone 7 Plus? Sarudzo huru! Aya ane hupenyu hukuru hwebhatiri; chaizvo, aya maApple maApple ane hupenyu hwakareba kwazvo hwebhatiri. Chikamu cheichi chakakonzerwa neiyo ultra-snappy uye inoshanda quad-core A10 Fusion chip uye chimwe chikamu chiri nekuda kwemabhatiri mahombe mukati meaya.
Paunenge uchikomberedza maawa makumi mana ekuteedzera odhiyo odhiraivho pane iyo iPhone 7, pane iyo iPhone 7 Plus iwe unowana mamwe maawa makumi matanhatu, uye nguva yekutaura ye3G yakanyanyawo kureba pane iyo iPhone 7 Plus: 21 maawa vs 14 maawa pane iyo iPhone 7. Yedu bhatiri bvunzo yakaratidza kuti iyo iPhone 7 inonunura maawa manomwe nemaminetsi makumi mana nematanhatu ehupenyu hwebhatiri, nepo iyo iPhone 7 Plus zvisingaite ine bhatiri kutsungirira kwemaawa 9 nemaminitsi mashanu.
Zvese zvakanaka uye zvinonakidza, asi pane & apos; zvakawanda zvaunogona kuita kuti uwedzere kugadzirisa hupenyu hwebhatiri re iPhone yako 7 kana 7 Plus. Iwe unogona kunge uchiziva uye woshandisa akawanda eaya atove, asi isu & apos; tichakupa chero mashoma matipi uye manomano ekuenda kumba uye kukwidza yako bhatiri hupenyu mutambo.
Ita shuwa yekutarisa ongororo yedu yemidziyo miviri:
10 iPhone 7 uye iPhone 7 Plus matipi ehupenyu hwebhatiri uye manomano
iphone 7 pamwe nesimbi bhamba
Pixel 6 & 6 Pro: Inofanira here Samsung neApple kunetseka?
Heano & maapos ekumisikidza animated GIF kana MP4 vhidhiyo seinofamba Wallpaper pane Android
Tsoka uye Kuziva